Nyowani Microsoft Edge inowana inhaka yeEdge chimiro, sarudzo yekuvanza "Vertical Tabs" bhatani
Muri pano: musha / Windows / Nyowani Microsoft Edge inowana inhaka yeEdge chimiro, sarudzo yekuvanza "Vertical Tabs" bhatani
Sezvo iyo nyowani yeMicrosoft Edge yakavakirwa paChromium, Microsoft iri kukwanisa kuunza maficha nyowani uye shanduko nekukurumidza nekukurumidza kumhanya sekuenzaniswa neiyo yekare Edge. Izvo zvakati, bhurawuza rekare rine zvimwe zvinonakidza maficha, imwe yeaya kuve kugona Pini Favorites pani kudivi rekona. Uye nhau dzakanaka ndeyeMicrosoft akawedzera chimiro kune iyo nyowani yeChromium-based Edge Canary uye Dev.
Sezvauri kuona mumufananidzo uri pamusoro, kudzvanya paFavorites bhatani, iro raunogona kuona muEdge barbar, rinounza runyorwa rwemapeji ese awakanyora seanodiwa. Pakona yepamusoro kurudyi rwechinyorwa, iwe unogona zvakare kuona sarudzo inonzi "Pin dzinodiwa," nekudzvanya pane iyo ichaendesa iyo pani kurudyi rwechidzitiro. Iwe unogona zvakare kuona iwo epaneru pani ine dhizaini nyowani.
Pane zvakawanda zvaive zvakashata muEdge yekare. Semuenzaniso, bhurawuza haina kukupa iwe sarudzo yekuvanza iyo "Seta tabo padivi" bhatani riri kumusoro kwekona kona yekona yako, uye nekuda kweizvi, vazhinji vashandisi netsaona vakarova bhatani. MuEdge nyowani, iwe unowana zvakare bhatani rakanzi "Vertical tabo”Panzvimbo chaipo, uye kuitira kuti vashandisi varege kurova netsaona, Microsoft iri kuwedzera sarudzo yekutendera vashandisi kuviga bhatani re" Vertical Tabs ". Iwe unogona kuona icho chiitiko muchiito pazasi.
Kuti uite shanduko ku "Vertical tabs" bhatani, unogona kuenda ku Settings -> Kuonekwa, uye wozogonesa / kudzima iyo "Ratidza akamira tebhu" yekuchinja.
Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti kugona kuviga iyo "Vertical tabo" bhatani kunowanikwa chete paEdge Canary 87.0.654.0.
Bvisa "Zvekukurumidza Kuwana, Isa Zvaunofarira Pano Pane Iyo Inodikanwa Bhawa" Kubva Edge Nyowani Tab
Maitiro Ekugonesa Kurara Tabs muMicrosoft Edge
Maitiro Ekubatidza & Shanduko dzekurara Tabhu Zvirongwa MuMicrosoft Edge
Goverana Akavhurika Tabhu muMicrosoft Edge